Mibvunzo - FAQ - Changzhou Hollysen Technology Trading Co., Ltd.
Iwe unogona here kupa sampuli kune yako kuchengetwa?
Hongu tinogona. Tinogona kupa sampuli muchitoro. Uye mutengi anofanira kubhadhara yemuenzaniso uye yekero mutengo.
Iwe unovimbisa sei mhando yezvigadzirwa zvako?
Isu tine yedu rabhoritari uye zvese zvigadzirwa zviri 100% zvakaongororwa zvisati zvaendeswa. Maitiro edu ese anoteedzera kuIATF16949 maitiro. Uye nenzira, isu tine 1 gore garandi kubva zuva reBL kubuda kana iwe ukashandisa chigadzirwa chedu nenzira kwayo.
Unogona here kugadzirisa basa?
Hongu, kana iwe usingakwanise kuwana zvinhu zvaunoda muchikamu chedu, unogona kutumira zvaunoda kwatiri, uye yedu nyanzvi R & D timu ichagadzira iyo ac compressor zvakanyanya iwe.
Ko nezve yako nguva yekuendesa?
Inokurumidza kwazvo nguva yekuendesa mazuva gumi uye avhareji nguva yekuendesa mazuva makumi matatu mushure mekusimbisa.
Ndeapi mazwi ako ekuendesa?
Chii chandinofanira kuita kana odha yangu isina kumbosvika?
Ive neshuwa kuti yako yese mirairo yakatumirwa kare. Kana odha yako ikaratidza pasuru yako pawebhusaiti yekutevera yatumirwa, uye iwe usingaigashire mumasvondo maviri; ndapota nyorera vatengi kuti vabatsirwe.
Ndingaite sei kuteedzera odha yangu?
Iwe unogona kutarisa mamiriro eodha yako chero nguva nekuenda zvakananga kune zvinongedzo zvinopihwa neyedu vatengi basa kuburikidza neemail. Ndokumbira utarise kuti iwe unofanirwa kuve uine iyo yekuodha nhamba uye email kero yekutevera mamiriro eodha. Tichatumira email nhamba yekutevera kwauri. Ndokumbira utarise kuti webhusaiti yevatakuri haigone kugadzirisa zvinyorwa uye chimiro chepasuru munguva.
Zvinhu zvako zvese zvirimo here?
Kazhinji kutaura, zvese zvinhu zvedu zvakanyorwa pane webhusaiti zviripo. Asi dzimwe nguva zvimwe zvinhu zvinogona kunge zvisiri muhurongwa nekuda kwekuda kwakasimba. Kana iwe ukatora chinhu ndokuchiripa, asi nekuda kwechikonzero chero chipi zvacho chisingawanikwe, tinobata iwe nekukurumidza sezvinobvira, uye kana kukuudza kuti usarudze chimwe chinhu chakafanana kana kugadzirisa kukurumidza kudzoreredza kuaccount yako.